Uzalwa indoda ongamtshela okuningi ngekusasa lakhe. Futhi wazi ukuthi yini okufanele sikulindele esikhathini esizayo, nokuthi elichaza umuntu onjalo, ongamtshela nezinkanyezi ezihambelana nosuku lomuntu. Lesi sihloko sizosisiza kube nentshisekelo labo kubalulekile ngo-1965. Yini isilwane kuba, futhi kanjani kungenzeka ngokuvamile ukuqoka amagama ambalwa umuntu azalelwa kule nkathi - Kungako-ke okwamanje bese bakutshele.
Okokuqala kubalulekile ukukhumbuza ukuthi udinga ukwazi kahle ukunquma uphawu yayo phezu ngesikhathi sokuzalwa komuntu empumalanga. Ngokwesibonelo, lapho ubhekwa ngonyaka ngokuhlukile kancane kunathi. Uma sinawo usuku lokuqala onyakeni omusha 1 Januwari, eMpumalanga kuyinto mhlaka-4 Febhuwari. Kuyinto kuphela kusukela ngalolo suku udinga ukuqala ukufunda uphawu lwabo zezinkanyezi. Okungukuthi, labo bazalelwa isikhathi kusukela ngoJanuwari 1 kuya ku-February 4, 1965, abakabi tinyoka Dragons. Kufanele sikhumbule yokuthi ekuqaleni 1966 kuyoba okwamanje Snake, uFebhuwari 4.
Yini engase ishiwo kubantu okufanele kubalulekile ngonyaka 1965? Yini isilwane akasho olimele? Yilesi isibonakaliso wesithupha ikhalenda Eastern - Snake. Lokho ngokuvamile singasho ngabantu abanjalo? Ngakho, into ebaluleke kakhulu - ke kuba labo bantu ababephikisa njalo bafinyelele imigomo yabo. Yena umgomo kungaba okuhle nokubi, ngokuba inyoka lokho akusho lutho, kodwa uma ifuna okuthile, uyokwenza noma yini ukuze ukuthole. Kubalulekile futhi ukusho ukuthi abantu uphawu ehlukanisa nakuhlakanipha izinqumo futhi siphile nengqondo esangulukile, ukuthi ngesinye isikhathi kuyabasiza ukufeza imiphumela emihle sphere ezihlukahlukene zokuphila.
Izinyoka futhi ube ukunambitheka omuhle. Egqoka kahle, anamathelane silandele isitayela esithile, njalo, njengoba besho, ukulungele ngokugcwele. Abameleli beNdikimba uphawu kungaba komzamo ukusekela noma iyiphi ingxoxo, ngoba kuyizinto kakhulu kahle ukufunda ukuthuthukiswa oluphelele. Futhi bakwazi kalula ukuze ulolonge izingxabano ngezindlela zamanxusa. Nokho, lezi abantu abafana bona abanye kungaletha izimangalo ezithile, bengakuthandi ukungafani futhi cheapness. Kubalulekile ukusho yokuthi iningi Snake - lucky ukuphila.
Izimfanelo ezinhle uhlamvu
Aware 1965 kuyinto isilwane - Snake, kuyafaneleka ukuba banake lo ezimfanelweni ezinhle zabantu esivelele zalesi sibonakaliso. Ngakho, okokuqala kufanele kuphawulwe ukuthi lena amadoda smart kakhulu futhi zivuthiwe ohlakaniphile. Snake futhi wangibekezelela kakhulu, nengenayo impikiswano, ngoba ngokuvamile ahlonishwayo kumibuthano ezahlukene zokuxhumana. Ngisho nalabo abamele lesi sibonakaliso esivela enhlanganweni nokuhlela amakhono, okuyinto evame kakhulu kusiza Izinyoka ekuphileni kwabo kwansuku zonke.
Izimfanelo ezimbi uhlamvu
Kufanele futhi ufunde ngezimfanelo negative okungase ukutshela ngesikhathi sokuzalwa komuntu Oriental (1965 ngonyaka lokuzalwa, uphawu Zodiac - Snake). Ngakho, ke efunwa kakhulu, hhayi kuphela ngokwabo kodwa futhi ukuba abantu ezizungezile. Abantu abanjalo bahlale bekulungele ukuhola, ngezinye izikhathi azitholi ngalé kwemingcele. Ezinye izinyoka kukhona abazalwa ngempela ukuvilapha, kodwa uma umbuzo asisebenzi ilitshe ohlosiwe. Abamele lesi sibonakaliso kuhluke uhlamvu nomhawu lokhu Engxenyeni yesibili nakanjani kudingeka bazi. Awu, izimfanelo ezimbi Lingase lihlanganise ukuzibamba ekusithekeni ngokweqile Snake.
Ukwazi lokho 1965 ngesikhathi sokuzalwa komuntu - Izinyoka, kumelwe futhi athi yiziphi abesifazane futhi amadoda - abameleli uphawu. Ngakho, bafowethu ngokwemvelo yabo abengakulindela umlingani ngokumthanda njalo kubo. Futhi Snake Woman Wonder ucabangela ukuphinga, nokuliphatha ayo ngokuthatha indlela okungeyona, okuyinto kuzuzisa kubo. Nokho, ashada nalezi izintokazi uyofuna ngangokunokwenzeka ukuze alondoloze zenkululeko nokuzibusa. Ngokuqondene namadoda inyoka, kuba nomona esabekayo. Bayoba njalo usola oshade naye ukungathembeki, ngezinye izikhathi ngisho nokuyisa lolu daba iphuzu nangendlela engenangqondo. Futhi, umuntu onjalo uyoba zaziziningi ezinhle futhi umhlinzeki, ngeke akuvumele umndeni wakhe yindlala noma ziphila endlini abandayo.
Adiliza, 1965 ngusiphi silwane kuwufanele futhi ukusho amazwi ambalwa mayelana nokuthi uluphi uhlobo umsebenzi kuyafaneleka kakhulu abantu abanjalo. Njengoba sekushiwo ngenhla, umuntu abathanda ukuhola, ngakho isihloko bengakutholanga kakhulu. Inkambu ezinhle zomsebenzi we lwalaba bantu - isayensi. Kukhona Ukugunda okusheshayo ingqondo izinyoka isifiso sokuba ezimele. Futhi abameleli ephelele esivelele zalesi sibonakaliso ucwaningo. Futhi njengoba Snake uthanda imali futhi iyakwazi ukubhekana nazo, kungase kahle zenziwe ibhizinisi.
Yini enye ukutshela ngesikhathi sokuzalwa komuntu Oriental (Snake, 1965)? Ngakho, qiniseka ukuthi usho kanjani ubudlelwane kukhule abantu abamele uphawu. Izinyoka ithule ngokwemvelo, futhi ubuhlobo badinga ukuvumelana ukuthula. Abanaso uthanda imizwa enobudlova futhi amahlazo, bayazi kahle yabathandekayo babo shazi. Abameleli beNdikimba uphawu lula ukuzwana nabantu abaningi, ngakho ngokuvamile kuba ukuntuleka kokukhulumisana ungapheli. Kodwa-ke, inkinga enkulu, kungase kube Umhawu izinyoka esingokwemvelo. Nokho, uma umlingani wakho akusho ukuyithukuthelisa inyoka, emndenini ngokuvamile kuyoba ukuthula, ukuthula nokuzola.
Ngakho, ngo-1965 ezinye isilwane (nezinkanyezi ezihambelana nosuku lomuntu) kuyinto - kuyacaca. Nokho, kufanele kusho ukuthi kukhona imininingwane ehilelekile ezincane: kuba inyoka lokhuni. Kusho ukuthini lokhu? Ngakho, laba yibo abantu ukuthi uphikelela kakhulu inkolelo yabo, azivamile amenable ukuba lobuphocelelako ubabonisa nzima. Futhi, Izinkuni Izinyoka bangcono kunabanye bayakwazi bafinyelele imigomo yabo, ngezinye izikhathi usebenzisa izindlela akuvumelekile. Nokho, abazange obakhathalelayo ke.
1996 - unyaka kwesilwane? Sithola ndawonye
Inani yegama Diana okungewakho unkulunkulukazi lovely Roman zenyanga
Golden ukhozi - inyoni sezintaba eziphakeme
Indlela yokusula inqolobane yakho ku-Internet Explorer: imfundo Wabasaqalayo
Umqeqeshi we ithanga ngezandla zakho: isigaba master, isinyathelo ngesinyathelo imiyalelo. Fall yezandla imifino